पाकिस्तानमा ठूलो साइबर हमला, सबै बैंकका डाटा ह्याक, करोडौं रुपैयाँ उडाएको आशंका - Everest Dainik - News from Nepal
पाकिस्तानमा ठूलो साइबर हमला, सबै बैंकका डाटा ह्याक, करोडौं रुपैयाँ उडाएको आशंका
इस्लामाबाद, पाकिस्तानका ह्याकरहरुले सबै बैंकका डाटा ह्याक गरेका छन् ।
ह्याकरहरुले पाकिस्तानी बैंकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चकनाचुर पार्दै सर्भरमा नै आक्रमण गरेका हुन । फेडरल इन्भेष्टिगेशन एजेन्सीका साइबर क्राईम विभाग
प्रमुखले करिब करिब सबैजसो बैंकमा ह्याकहरुले आक्रमण गरेको बताएका हुन ।
गम्भीर आर्थिक संकट झेलिरहेको पाकिस्तानमा बैंकहरु ह्याकरको निशानामा परेपछि यो विषयले ठूलो रुप लिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस पाकिस्तानले किन लगायो आइपीएल प्रशारणमा प्रतिबन्ध? यस्तो छ कारण
पाकिस्तानी दैनिक पत्रिका डनका अनुसार, फेडररल इन्भेष्टिगेशन ब्यूरोका क्राईम प्रमुख मोहम्मद शोएबले ह्याक भएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार, यो आक्रमण पाकिस्तान बाहिरबाट गरिएको थियो । ह्याकरहरुले कति रकम चोरी गरे भन्ने कुरा अझै खुल्न सकेको छैन ।
योसँगै पाकिस्तानी बैंकहरुको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत ठूलो प्रश्न उठेको छ । साइबर क्राइम विभागले सबै बैंकहरुलाई पत्राचार गर्दै सुरक्षा व्यवस्था झनै कडा बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस पानी पिउँदा मृत्युदण्डको सजाय पाउने आसिया बीबीकाे पक्षमा फैसला, पाकिस्तानमा बल्याे अागाे ?
ह्याकरहरुले १० वटा पाकिस्तानी बैंकमा रहेको ८ हजार भन्दा बढी ग्राहकका डाटा ह्याक गरेको डनले उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो दिनमा थाहा नै नपाई आफ्नो बैंक खातामा करोडौं रकम जम्मा हुन थालेपछि कतिपय सर्वसाधारणले उजुरी समेत गरेका थिए ।
ट्याग्स: Data Hack, pakistan